အမိုက်စား ကိုယ်ပိုင်ကားကြီး စီးနေရပြီး သာယာနေတဲ့ သူမ ရဲ့ဘဝလေး ကို ပရိတ်သတ်တွေအား ချပြလိုက်တဲ့ အလှမယ်သင်းသင်း ရဲ့ ဗီဒီယို – GaMone Media
Homepage / Celebrity / အမိုက်စား ကိုယ်ပိုင်ကားကြီး စီးနေရပြီး သာယာနေတဲ့ သူမ ရဲ့ဘဝလေး ကို ပရိတ်သတ်တွေအား ချပြလိုက်တဲ့ အလှမယ်သင်းသင်း ရဲ့ ဗီဒီယို
အမိုက်စား ကိုယ်ပိုင်ကားကြီး စီးနေရပြီး သာယာနေတဲ့ သူမ ရဲ့ဘဝလေး ကို ပရိတ်သတ်တွေအား ချပြလိုက်တဲ့ အလှမယ်သင်းသင်း ရဲ့ ဗီဒီယို
By Ga MonePosted on September 14, 2021 September 14, 2021
အလှမယ်သင်းသင်းလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ ပရိသတ် တွေလည်း သိပြီးသား ဖြစ်ကြမှာပါနော်.. သူမ ကတော့ မင်းသားဝေဠုကျော်နဲ့ ကတောက်ကဆ ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ‌တော့ ဝေဖန်မှုတစ်ချို့ကို ခံခဲ့ရသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်… မကြာခင်ကာလတုန်းကလည်း သင်းသင် းဦးဆောင်တဲ့ ပရိဟိတအဖွဲ့တစ်ခုနဲ့လည်း အဆင်မပြေမှုတွေ ဖြစ်လာခဲ့ပြီး သူမကိုယ်တိုင် စိတ်ညစ်မှုတွေနဲ့အတူ Live လွှင့်ပြီး ဖြေရှင်း လာခဲ့ပါသေးတယ်။
ခုလိုဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ အခြေအနေအရမှာ့ လူတိုင်းဟာ စီးပွားရေးတွေ ကျပ်တည်း ကုန်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်.. .. ကိုဗစ်ကြောင့်လည်း အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေ မှာလည်း သင်းသင်းက အောက်ဆီဂျင်တွေ ရှာပေးတဲ့ လုပ်အားဒါနတွေကိုလည်း ပြုလုပ် ခဲ့ပါသေးတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ သင်းသင်းက သူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကို ဖေ့ဘုတ် စာမျက်နှာမှာ မတင်တော့ဘဲ Tiktok မှာပဲ တင်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာလည်း သင်းသင်းက သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ Tiktok လေးကို သူမရဲ့ချစ်ပရိသတ်တွေ အတွက်တင်ပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်.. သင်းသင်းကို ချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ သူမရဲ့ဗီဒီယိုအောက်မှာ ကောမန့်တွေနဲ့ ချစ်စကားတွေ ပြောထ ားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း သင်းသင်းရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကား အမိုက်စားနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးချစ်ပေးကြပါအုံးလို့..။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
Source: Thin Thin
ဆက်ဆီ ဆန်ဆန် ဖက်ရှင်လေး နဲ့ မိမိုက် လှပ လွန်းနေတဲ့ အိမ့်ချစ် ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်များ
“မင်း ရဲ့ အချစ်များ အမြဲတမ်း ကိုယ့်အတွက်ပါ ” အလန်းစား ရိုက် ထားတဲ့ အယ်လာ
ဆက်ဆီ ကျကျ ဖက်ရှင်လေး နဲ့ အမိုက်စား ပိုစ့် ပေးကြမ်း နေ တဲ့ ပက်ထရစ်ရှာ ရဲ့ ပုံရိပ်များ
Previous post ဆယ်ကျော်သက် တစ်ယောက် လို့ ကြွှေစရာ ကောင်းလွန်း နေတဲ့ မိုးမြင့်သဇင်
Next post ကိုဗစ်ကပ် ရောဂါတွေ ပြီးသွားတဲ့အခါ ပထမဆုံးသူလုပ်ချင်တဲ့ အရာတစ်ခု ကို ပရိတ်သတ်ကြီးအား ပြောပြ လာတဲ့ “စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်”
ရေကူးကန် မှာ ရိုက်ထား တဲ့ တင်းရင်း ကိတ်လွန်းတဲ့ ပုံတွေ တင်ပေး လိုက် တဲ့ ချောကလျာ
ဆက်ဆီ ကျလွန်း တဲ့ ဘရာ နဲ့ မိလွန်း နေတဲ့ စစ်ပိုးအိမ် ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်များ
Copyright © 2020. Created by Travel &TipSport. Power by GaMone Media